ढोरपाटनमा स्थानीयवासीले गरे सेनाको विरोध – ABC KHABAR
ढोरपाटनमा स्थानीयवासीले गरे सेनाको विरोध
March 21, 2016 March 21, 2016 ABC Khabar राजनीति, समाचार
काठमाडौं । बागलुङको ढोरपाटन शिकार आरक्षमा स्थानीयवासीको अनुमतीविना सेनाको क्याम्प राख्न लागेको भन्दै सेनाको विरोधमा नारा जुलुस गरेका छन् । क्याम्प खडा गर्न ब्यबस्थापनको लागि साधा पोशाकका नेपाली सेनाहरु आएपछि स्थानीयबासीहरुले आइतबार नारा जुलुस गरेका हुन् । ढोरपाटन शिकार आरक्ष सुरक्षाको लागि भन्दै सरकारले सेना राख्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयबासीहरुले क्याम्प नराख्न आग्रह गर्दै विरोध जनाउदै आएको छ ।
५÷७ जना सेनाको टोली गत फागुन २८ गते ढोरपाटन शिकार आरक्षको कार्यालयमा पुगेर ब्यारेक राख्ने विषयमा छलफल चलाएको बुझिएको छ । तत्कालको लागि आरक्ष कार्यालयकै भवनहरुमा सेनाको ब्यारेक राख्ने छलफल भएको बुझिएको छ । छलफलमा बोबाङ गाविसका पन बहादुर बिक र धनबहादुर अडै पनि सहभागि थिए । दुवैजना शिकार आरक्षको नाममा सेनाको ब्यारेक ल्याउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए । छलफलमा सेनाको क्याप्टेनले आफूहरु सरकारी कर्मचारी भएकोले सरकारले पठाएपछि आउनुपर्ने बताएका थिए । विक र अडैले भने ब्यारेक आए कडा विरोधहुने बताएका थिए ।
सोही विषयमा स्थानीयबासीले आरक्ष घेराउ गर्दै सेनाको ब्यारेक ल्याउने विरुद्ध नारा जुलुस गरेको पूर्णबहादुर मगरले बताए । विरोध कार्यक्रमहुने भएपछि हिजैदेखि प्रहरी त्याहा पुगेको मगरले बताए । करिव ५ सयको उपस्थितिमा सेनाको ब्यारेक राख्ने निर्णयको विरोधमा नारा जुलुस भएको छ ।
यता संघर्ष समितिको संयोजक सुरेन्द्र पुन मगरले आजै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । स्थानीय मगर समुदायको स्वीकृति विना अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) १६९ विपरित सेना खटाउन लागेको विरुद्ध भोली (आई.एल.ओ.) १६९ कार्यान्वय सचिवालय सिंहदरबारमा उजुरी दिने मगरले बताए ।
मगर समुदायले बाहुल्यता रहेको रुकुम, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाको १४ वटा गाविस ओगटेको ढोरपाटन शिकार आरक्षमा सरकारले नेपाली सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले शिकार आरक्षको लागि भन्ने गरेपनि स्थानीयबासीले आरक्ष सुरक्षाको नाममा आदिवासी मगरहरुलाई दुःखदिने, चरिचरण बन्द गर्ने तथा शिकार अरक्षको नाममा बस्ति समेत उठाउने तयारी गरेको भन्दै सुरेन्द्र पुन मगरको नेतृत्वमा ढोरपाटन शिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर क्याम्प खडा गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै आएका थिए । क्याम्प राख्ने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।
सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय बद्धर गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रप्रति लगायतको सरकारको बिभिन्न १७ वटा निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका पीडितहरु मिलाएर बनाइएको समितिको गाउ“ गाउ“सम्म समिति बनाएर हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । सेना राख्ने निर्णयको विरोध भइरहेको ढोरपाटन शिकार आरक्ष अध्ययनको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब महासचिव आङ्काजी शेर्पा सहितको टोली २०७२ माघ २ गते ढोरपाटन पुगेर जानकारी लिएका थिए ।
संघर्ष समितिले आफूहरुको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै जवरजस्ति क्याम्प खडा गरिए कडा प्रतिरोध गर्ने बताउदै आएको छ । मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको शिकार आरक्षलाई सामुदायिकरण गरिनुपर्ने स्थानीयबासीको माग रहेको छ ।
आरक्ष विश्वको पुजिपति र शासकका छोराछोरीहरु मनोरञ्जनको रुपमा नाउर र झारल शिकार खेल्न आउछन । प्रत्येक बर्षको चेत्र—बैशाख र अशोज—कार्तिक गरी दुई सिजन विदेशी शिकारीहरु त्याहा नाउर र झरलको शिकार गर्न आउने गर्छ । नाउरलाई १२ र झारललाई ९ लाखसम्म सरकारलाई तिरेर विदेशीहरु आरक्षमा शिकार खेल्ने गर्छ । यद्यपि आरक्षको आय श्रोत स्थानीयबासीले केही उपभोग गर्न पाउदैनन् ।
समुन्द्री सतहदेखि २५ सय देखि ५ हजार ५ सय मिटरको उच्चाइमा रहेको ढोरपाटन क्षेत्र बाग्लुङको चार (निसी, बोबाङ, अधिकारीचौर, बोङ्गादोभान), रुकुमको ७ (रन्मामैकोट, तकसेरा, हुकाम, काक्री, जाङ, कोल, राङसी) र म्याग्दीको ३ ( मुना, लुलाङ, गुर्जा) गासिहरु गरी १३,२५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ ।
२०३९ सालमा स्थापित भएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा १८५ थरीको वनस्पति, ३२ थरीका वन्यजन्तु, १३० प्रजातीका चराचुरुङ्गी रहेको छ । शिकार आरक्षकै कर्मचारीहरुले सुरक्षा गर्दै आएको शिकार आरक्ष माओवादी द्वन्द्व कालमा कर्मचारीहरु विस्थापित भएको थियो । द्वन्द्व कालभर बेवारिसे जस्तो भएको आरक्ष शान्ति प्रकृयापछि कर्मचारी पुन स्थापित भएको हो ।
सरकारले २०६९ तिर आरक्ष सुरक्षाको लागि सेना राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णय लगतै स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएको छ । विरोध सुरु भएपछि सरकारले स्थानीयबासीहरुस“ग ब्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जवरजस्ति ब्यारेक खडा गर्न खोजिएपछि स्थानीयबासीको आक्रोस बढ्नु स्वभाविक हो । छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्दा उचित हुनेदेखिन्छ ।
इतिहासको एक कालो वकपत्र